Sida si xor ah loogu sawiro Ereyga oo sawiro loogu daro dukumiintigaaga | Abuurista khadka tooska ah
Sida si xor ah loogu sawiro Ereyga oo sawiro loogu daro dukumintigaaga
Lola curiel | | Photoshop, Tababarada
Noocyada ugu dambeeya ee ereyga waxaa ka mid ah aalado badan oo kaa caawin doona inaad kobciso dukumiintiyadaada adoo ku daraya sawirro iyo sawirro. Adeegsiga iyaga ayaa ah mid aad u fudud iyo, markaad barato inaad wax ka qabato, waxaad ogaan doontaa inay yihiin xulafo weyn si loo abuuro qoraallo soo jiidasho leh oo xitaa si fudud loo fahmi karo.
Qoraalkan waxaan kuugu soo bandhigayaa aaladaha ugu waaweyn ee sawir qaadista ee Ereygu bixiyo waxaanan ku siinayaa tilmaamo si aad wax badan uga faa'iidaysato. Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo sawiro Ereyga, ha moogaanin qoraalkan!
1 Qalab sawir
2 Qalabka moodooyinka 3D
3 Qalabka qaababka
4 Astaamaha qalabka
Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa ku samee sawirro bilaash ah qaab fudud. Waxay bixisaa suurtagalnimada samaynta istaroog adigoo fartaada toos ugu dul taagaya qaybta taabashada kombiyuutarka, adoo dhaqaajinaya ikhtiyaar «iskuxul koodhka taabashada ah». Faa'iido kale oo weyn ayaa ah in istaroogyada la dhaqaajin karo oo la beddeli karo.
Kala xisaabtan saddex nooc oo burush ah: qalin, qalin iyo iftiin (ama iftiimiya). Qaabeynta dhammaan qalimaanta waa la beddeli karaa, beddelaya: cabbirka iyo midabka. Haddii aad wax siiso si aad ugu darto qalin, waxaad ku dari kartaa buraashyo cusub oo waxaad abuuri kartaa palette leh kuwa aad aadka u isticmaasho. Qalabkani waa mid aad waxtar ugu leh hoosta ka xariiqda qoraallada iyo muujinta qaybaha qoraalka.
Qalabka moodooyinka 3D
Erey leh Waad ku dhejin kartaa dukumintiyadaada tusaalooyin 3D ah oo horey loo qorsheeyay. Si aad u sameyso, waa inaad riixdo geli> moodooyinka 3D. Sida aad arki doonto, waxaad haysataa noocyo badan oo aad kala dooran karto, waxaad dooran kartaa mid ama in ka badan markiiba oo adigoo gujinaya dusha waxaad ku dari kartaa bogga.
Ku darista qoraaladaada iyo qoraaladaada waa fikrad aad u fiican, qaasatan hadaad kahadleyso wax ay adagtahay inaad qiyaasi karto hadaadan arkeynin (tusaale ahaan, hadaad qeexeyso qaab dhismeedka lithosphere ama hadaad sharaxeyso waxa qaybo ka mid ah unugyada waa epithelial).
Sawiridda astaamo gaar ah oo bilaash ah waxay noqon kartaa dhib, xitaa intaa ka sii badan haddii, sida aniga oo kale, aadan haysan xirfado badan oo sawir ah. Ereygu wuxuu bixiyaa suurtagalnimada in lagu daro qaababka asalka ah ee qoraalkaaga. Adigoo gujinaya geli> qaabab waxaad heli doontaa buug-yare ballaaran. Waxaad ka abuuri kartaa qaabab joomatariyeedka caadiga ah, qaabab kale oo aad u dhib badan iyo xitaa fallaaro aad waxtar u yeelan doona markaad tilmaamayso qaybo ka mid ah dukumintiyadaada
Waxay aad ugu egtahay aaladda foomamka, inkasta oo buugga ay bixisaa ka sii kala duwan yahay, Waxaad ka heli kartaa astaamo ku dhowaad wax walba! Si aad si fudud ugu hesho iyaga waxaad isticmaali kartaa mashiinka wax lagu raadiyo.
Si loo helo astaamaha ereyga, waa inaad riixdo geli> icons, ka dooro midka aad rabto buugga kaas oo ka muuqan doona midigta oo sameyn doona guji en gelin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida si xor ah loogu sawiro Ereyga oo sawiro loogu daro dukumintigaaga
Affinity waxay mar labaad siineysaa tijaabooyin 90-maalin ah oo barnaamijyadeeda cajiibka ah iyo qiimo dhimis 50% ah